Ndi Okike Mee-Udo & Ntutu Ulo Stylist Guild jidere Virtual Gala Kwadoro site na TVU Networks Cloud-based Video Conferencing Platform | NAB Gosi News | 2021 NAB Gosi Onye Mmekọ na Onye Mmepụta nke NAB Show LIVE. Akụkọ Mgbasa Ozi Mgbasa
Home » News » Ndi na eme ihe eji eme ihe na ntutu na ndi n’eme ka ha di nma n’ime ihe ndi TVU Networks.
Ndi na eme ihe eji eme ihe na ntutu na ndi n’eme ka ha di nma n’ime ihe ndi TVU Networks.
EGO MOUNTAIN, CA - Eprel 6, 2021 - Ndi emebere-eme ihe na ntutu isi Guild (MUAHS, IATSE Mpaghara 706) jidere 8th Annual MUAHS Guild Awards dika gala nke gara aga na Satọdee gara aga, Eprel 3, 2021. TVU Networks'Teknụzụ na-ejikwa ọrụ nrụpụta dịpụrụ adịpụ. Ihe ngosi a bụ nke ndị IngleDodd Media mepụtara ma mepụtara site na Honeysweet Productions. Kwadoro site na nwa-ish onye na-eme ihe nkiri Anthony Anderson, ihe karịrị ndị nhọpụta 300 gara nke ọma. Onyinye a gosipụtara ụdị ọpụrụiche pụtara ìhè na etemeete na ịme ntutu na ihe nkiri eserese, telivishọn, azụmahịa na ebe nkiri.
Nke a kara akara nke atọ Hollywood ụlọ ọrụ enọ egosi na ọnwa abụọ na-akwado site na TVU Networks'igwe ojii dabeere na video conferencing ikpo okwu.
Gosi ndị na-emepụta ihe eji TVU Partyline ígwé ojii dabeere, agbasa ozi n'ikuku-àgwà video conferencing ikpo okwu na Ihe ntụgharị TVU jikọọ mebere nomine na award mmeri na ndụ iyi. N'ụbọchị ngosi ahụ, ndị niile ahọpụtara aha ha dịpụrụ adịpụ, ndị ọbịa na ndị ọrụ ahụ sonyere na ogbako TVU Partyline. Ndị nomine nwere ike isonye na ihe nkiri a na - eme ma lelee ya site na iji nzaghachi vidio agbakọọ TVU Partyline (VFB.)
Onyinye onyinye ahụ gosipụtara edemede 21 dị iche iche. Mgbe a mara ọkwa otu, ndị niile ahọpụtara n’otu ahụ pụtara n’ihu onye ngosi ahụ. Egosiri onye mmeri ahụ ihuenyo zuru oke wee kwuo okwu nnabata ha.
Eddie Murphy nwere onyinye nkwanye ugwu dị iche iche, nke Arsenio Hall gosipụtara, kpakpando nke Murphy wepụtara na nso nso a Na-abịa 2 America.
Ndị ọzọ na-egosi ihe gụnyere: Glenn Close (Hillbilly Elegy), Jennifer Garner (Ee Day), Scarlett Johansson (JoJo rabbit), (Judith Light (Onye ọchịchị), Ming-Na-Wen (Onye Mandalorian), Maria Bakalova (Onyeoma Tochukwu Nnamani), Cheryl Burke (Egwú na Stars), Temuera Morrison (Onye Mandalorian), Doug Jones (Star mee njem ahụ: Nchọpụta), AJ Buckley (Akara otu), Michael Okeke (Henry Danger), na IATSE International President Matthew L. Loeb.
“N’afọ a siri ezigbo ike iwulite obodo anyị na ndị otu anyị ma mekwa ka mmụọ anyị dịrị maka ọdịnihu, yabụ na anyị nwere nnukwu obi ụtọ inwe ikike ijikọ aka jiri ya. TVU Networks azịza ya. Anyị na-atụ anya na onye ọ bụla nwere nnukwu ahụmịhe ebe ọ bụla ha lere mmemme mmemme anyị anya, ”ka Julie Socash kwuru, onye isi ala IATSE Mpaghara 706.
TVU Partyline, mmepe mgbanwe maka imepụta mmekọrịta mmadụ na ibe ya, na-enyere ndị otu niile nọ na mpaghara mmepụta ihe dịpụrụ adịpụ ohere ikwurịta okwu na enweghị nsogbu. Ọ na - enyere ndị ọrụ aka aka, ndị onyinye na ndị ọbịa ka ha jiri ngwa ọrụ mepụta ma jikọta ọnụ na ezigbo oge HD video àgwà, n'ụzọ zuru okè gakọrịta ọdịyo na vidiyo na mix mwepu otu audio nzaghachi. Emekota site na Partyline ga-ekwe omume site na iji Real Time Interactive Layer (RTIL). Site n'iji URL dị mfe kerịta, ndị sonyere nwere ike isonye na Partyline iji lelee usoro mmemme niile iji bie ma na-emekọrịta, na-atụle ma na-ekere òkè na mmepụta ihe ezigbo oge na-adịghị achọpụta oge.
"Obi dị anyị ezigbo ụtọ ịhụ ka ndị na-agbata n'ọsọ nabatara TVU Partyline," kwuru TVU Networks'CEO Paul Shen. “Anyị kwenyere na ọbụlagodi mgbe ngosi ngosi nke ihe nkiri na-alaghachi na steeti pre-COVID, anyị ga-aga n'ihu na-ahụ nsonye arụmọrụ na ngwakọ ngwakọ nke ụdị na nke mmadụ. TVU Partyline na-ekwusi ike na onye ọ bụla a họpụtara ahọpụtara ma ọ bụ onye a na-asọpụrụ chọrọ ị sonye, ​​n'agbanyeghị ọnọdụ, nwere ike ịme ya. Nanị site na otu nyiwe, ndị na - emepụta ihe nwere ike inye ihe ngosi na - akpali akpali ma eleghị anya ọbụna karịa ndị ahọpụtara karịa ka ha ga - esonye.
Thai Broadcasting Upgrades na gbasaa na PlayBox Neo - April 8, 2021
Ndi na eme ihe eji eme ihe na ntutu na ndi n’eme ka ha di nma n’ime ihe ndi TVU Networks. - April 6, 2021
Netwọk TVU na-ekwupụta Kit nke Onye Mmepụta Software Na-ewu ewu maka TVU Na-ewu ewu Ebe ọ bụla - March 24, 2021
Awards TVU Networks video n'elu IP videoconferencing 2021-04-06
Previous: AKORKỌ Ihe Signrịba Ama Ihe ngosi nke ndị na-ese Ihe na McCormick Brothers
Osote: Ekstraklasa ahọrọ Red Bee ka ọ bụrụ onye ọrụ teknụzụ ọhụụ maka Ekstraklasa.TV